Galmudug oo ciidamo badan u dirtay deegaano hoostagga Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo ee Gobolka Mudug, ayaa sheegaya in ciidamo badan oo ka tirsan maamulka Galmudug ay u dhaqaaqeen deegaano ka tirsan Gobolka Mudug, gaar ahaan deeganada ay maamulaan Galmudug.
Duleedka Deegaanka Af-Barwaaqo ayaa laga soo sheegay inay halkaasi gaaren Shabaab firxad ah oo ka soo cararay Dagaalada aaga Garacad, waxaana la sheegayaa in ciidamadan badan ee Galmudug ka tirsan ay ka hortagayaan Shabaab soo gala deeganada Galmudug.
Dad reer miyi ah oo ku nool Duleedka Deegaanka Af-Barwaaqo, ayaa sheegay inay arkeen dagaalyahano Shabaab ka tirsan oo diif iyo daal badan ka muuqda, kuwaasi oo dadka weydiinaya halka ay ka xigto Xarardheere, sidoo kalena dadka weydiisanaya wax ay cunaan.
Ciidamada Galmudug ee Magaalada Gaalkacyo laga diray ayaa la sheegay inay ku sugan yihiin meel ku dhaw Deegaanka Af-Barwaaqo, waxaana ciidamada ay naqshadeynayaan sidii Shabaabka halkaasi soo gaaray u qab qaban lahaayeen.
Xoogaga Shabaab oo jab xoogan kala kulmay dagaalada Puntland ay ku qaadeen, ayaa inta hartay waxaa la sheegayaa in dhanka Galmudug ay u soo carareen si ay ugu noqdaan deeganadii marka hore ay ka baxeen.
Saraakiil ka tirsan Maamulka Galmudug ayaa sheegaya in si weyn looga taxadaray in ciidamada Shabaab ee dagaalada Puntland lagu soo jabiyay ay soo gaaraan deeganada Galmudug ay maamusho, islamarkaana loo diyaariyay ciidamo ka hortagga.
Madaxweynaha Galmudug ayaa shalay Gaalkacyo kulan kula qaatay Saraakiisha ciidamada oo uu kala hadlay sidii ay kaga feejignaan lahaayeen Shabaab soo gala deeganada Galmudug.